Starbucks Coupon Kubiridzira: Wadii barcode? | Martech Zone
China, August 31, 2006 China, August 31, 2006 Douglas Karr
Seti Blog ine katsamba nezve isina kubatwa inobatwa coupon snafu ku Starbucks. Kupiwa saizi yaStarbuck, ini handinzwisise kuti sei vasina kuisa zano rekoponi nebarcoding. Iyi tekinoroji yakapusa uye isingadhuri… zvinongoda kugonesesa paPoint of Service computer.
Ungaita sei izvi? Mazhinji maemail kushambadzira software vatengesi vanobvumidza Substitution Tambo (kana vasingadaro, enda ku ExactTarget). Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kupasa nyore tambo munzira yemufananidzo. Iyo tambo yakapfuudzwa panguva iyo email yakavhurwa inonyatso kuvaka iyo barcode zvine simba, saka Starbucks inogona nyore nyore kunyorera imwe mhando yekoponi kodhi - yakasarudzika kune anonyorera - uye kuiburitsa sebarcode.
Kana yaregererwa, mubati wemari anogona kuongorora email ine barcode pairi. Iko kukosha kunotariswa kumusoro mukati meiyo sisitimu uye wozotariswa kuti ndeyechokwadi Uye kununurwa. Uye zvakare, iko kununurwa kwekoponi kunogona kunyoreswazve kune chaiko Email Kero - ichipa iyo Marketer nerumwe ruzivo rwakakosha pamusoro pekuti ndiani akadzikinura koponi, zvakatora nguva yakareba sei, kuti vakanunura kupi, nezvimwe. Iyi data rine simba! Chokwadi ruzivo richava sosi hombe pasi munzira!
Nevamwe vangave pasherufu tekinoroji uye nekuronga kuri nyore, Starbucks angadai akazviponesa nyadzi.
Aug 31, 2006 na8: 55 PM
Pfungwa yako yakanaka. Ini ndinoshamisika kuti chii icho Starbuck's IT vakomana vaiita?